रामारोशन पर्यटन क्षेत्र विकासका लागी गुरु योजना तयार, पर्यटक भित्र्याउन के भए काम ? – Bannigadhi Today
रामारोशन पर्यटन क्षेत्र विकासका लागी गुरु योजना तयार, पर्यटक भित्र्याउन के भए काम ?
एकेन्द्र खत्री २०७८ असोज ११, सोमबार १९:१३
आज ४२ औँ विश्व पर्यटन दिवस अछाममा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइएको छ । कोभिड–१९ महामारीकै बिच स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी भौतिक रूपमा दिवस मनाइएको हो ।
दिवसका अवसरमा रामारोशन पर्यटन क्षेत्र विकास समितिको आयोजनामा वडा नम्बर ५ रामारोशनमा स्थानीय सँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको छ ।
रामारोशन पर्यटन क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष चक्र बहादुर रावलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा रामारोशन पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि स्थानीय, सरोकारवाला निकाय र राजनीतिक दलको के कस्तो भूमिका हुने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिएको हो ।
यसैबिच कोरोना सङ्क्रमणका कारणले थला परेको अछामको पर्यटकीय क्षेत्र रामारोशन बिस्तारै लयमा फर्किन थालेको छ । रामारोशनमा अवस्थित रोशन, रामे, जिंगाले तालकै कारण पनि आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बाक्लो हुने गरेको छ ।
मनमोहक ताल, अग्ला पहाड, विभिन्न रङ्गीबिरङ्गी फुलहरूले पर्यटकहरूको मन आकर्षित हुने हुनाले पनि रामारोशनमा पर्यटकहरूको आवागमन बढिरहेको रामारोशनका स्थानीयहरूले बताएका छन् ।
करिब २ वर्ष देखि कोरोनाको महामारीका कारणले लकडाउन हुँदा पर्यटकीय गन्तव्य रामरोशनको होटेल व्यवसाय प्रभावित बन्न पुगेको थियो ।
सरकारले घोषणा गरेको १०० गन्तव्यमा पर्न सफल भएको रामारोशनमा पर्यटकले होटेलमा पनि चहलपहल बढ्न थालेको छ । कोरोना सङ्क्रमणले थलिएको पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि विभिन्न प्रयास भइरहेको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चक्र रावलले बताउनुभयो ।
उहाँले एकतर्फ सङ्क्रमणले थला परेको र अर्को तर्फ बर्षबर्ष बाढीका कारणले सडक बिग्रेका कारणले सोचेअनुरूप रामारोशनको पर्यटन क्षेत्रको विकास नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आफू जहिले पनि सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय, विभिन्न सरोकारवाला निकाय र राजनीतिक दलले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कुराकानी : चक्र रावल